ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများမဟုတ်သည့်တိုင်ကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကြောင့်စွဲလမ်းနေသနည်း။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
'ငါ့သူငယ်ချင်းတွေမဟုတ်ပေမယ့်ငါဘာကြောင့်စွဲလမ်းနေတာလဲ' ဟုသင်စဉ်းစားမိလိမ့်မည်။ လူတွေရဲ့ ဦး နှောက်တွေကတော့မတူကြဘူး။
နှစ်ဦးစလုံးမျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူမူးယစ်အပြုအမူတွေနှင့်တ္ထုများတုံ့ပြန်ပုံကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ ကြီးပြင်းတဲ့သူဥပမာအားဖြင့်, သူတို့အ လုံလုံခြုံခြုံပူးတွဲ သူတို့ရဲ့စောင့်ရှောက်သူများလျော့နည်းအလွယ်တကူအလေးပေးနေကြသည်။ မသူများသည်ပိုပြီးတုန်လှုပ်ချောက်ချားနေကြသည်နှင့်အခြားသုတေသနသူတို့စှဲရတဲ့ဖို့ပိုအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အလားတူပင်မိတ်ဖက်နှင့်သင်၏ porn-သုံးပြီးမိတ်ဆွေတွေကိုအတန်ငယ်ကြောင့်မှစွဲဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြသည် touch နှင့်ပေါင်းသင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကို။ သင်တစ်ယောက်တည်းနေစဉ်သင်ပိုမိုအားနည်းသွားနိုင်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းသွားခြင်းမရှိ အဖြစ်ကောင်းစွာလိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
အစားအစာနှင့်လိင်၏ယနေ့ superstimulating ဗားရှင်းအန္တရာယ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးထားရန်ပေါ်လာပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ခုနစ်ဆယ်ကိုးရာခိုင်နှုန်း အမေရိကန်လူမျိုး (နှင့် ပို. ပင်အခြားနိုင်ငံများမှလက်တဆုပ်စာအတွက်) အဝလွန်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှုသူတို့အားလုံးကိုအားနည်းချက်ဖွဲ့သောမဖြစ်နိုင်ပါပဲ။ သိပ်ဆူအောင်ကျွေးသောအစားအစာ သူ့ဟာသူ ဦးနှောက်အပေါ်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအပျြောအပါးမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့် Bing ကိုအားပေးအားမြှောက်။ သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိခြင်း၏အချက်မှမူးရူးရန်သင့်အားဖြစ်စေတဲ့, သင့်ဦးနှောက်အပေါ်အလားတူမူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြပေမည်။ မြင် Porn ကဗီဒီယိုတွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်.
2016 ၏အဖြစ်, အနီးကပ် porn ကိုသုံးပါသောလူတို့၏% 30 ဖြစ်ကြောင်း ပြဿနာများသတင်းပို့ဒါမှမဟုတ် ပြဿနာများရှိခြင်းအဖြစ်စမ်းသပ်ခြင်း။ (ထိုလေ့လာမှုနှစ်ခုအနက်မှပထမတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများ၏ထက်ဝက်သည်တစ်ချိန်က“ စိတ်မ ၀ င်စားမှု” သို့မဟုတ်“ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာ” များကိုတွေ့ရှိခဲ့သောပစ္စည်းများသို့မြင့်တက်သွားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ကြည့်ပါ လေ့လာရေး အနိမ့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲချိတ်ဆက် ဦးနှောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။)
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများမဟုတ်သည့်တိုင်ကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကြောင့်စွဲလမ်းနေသနည်း။ သတိရရမည့်အခြားအချက်တစ်ခုမှာအခမဲ့အင်တာနက်စီးဆင်းမှုကိုအင်တာနက်ပေါ်မှလွှင့်ထုတ်လွှင့်သူများသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင်အသုံးပြုသူများသာရရှိနိုင်ပြီး၊ ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများသည်ပိုမိုပြင်းထန်လာသည် (လှုံ့ဆော်မှု) ဖြစ်သည်။ လှုံ့ဆော်မှု၏အတိုင်းအတာနှင့်ဒီဂရီနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအသုံးပြုသူများစွာအတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပုံရသည်။ ပထမ ဦး ဆုံး bandwidth တိုးမြှင့်လာသည့်ကွန်ပျူတာ wizards များသည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပထမဆုံးပြသခဲ့သည်။ ယခုအမြန်နှုန်းဖြင့်စတင်ခဲ့သောယောက်ျားများသည်ပြwithနာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထို့အပြင်ပိုမိုအစွန်းရောက်သောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသောသူများသည်ထပ်မံမြင့်တက်လာကြပြီးသူတို့၏ ဦး နှောက်များကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးများလာသည်။ virtual reality porn ဘာလုပ်မလဲ။
အားလုံးကတော့အသုံးပြုသူများအတှေ့အကွုံမြား (သို့မဟုတ်အသိအမှတ်မပြု?) သူတို့ porn အသုံးပြုမှုနှစ်ပေါင်း၏တူညီသောအရေအတွက်အားပြီးနောက်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများဖြစ်ရိပ်မိသောအရာကို။ အချို့ကရောဂါလက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် (သို့မဟုတ်သူတို့ကိုသည်းမခံရှာတွေ့မှစတင်) အဲဒီနောက်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာတစ်ဦး trendsetter ဖြစ်နိုင်သည်။
ထကြွလွယ်သောအပြုအမူအပေါ်ဘရိတ်ချပြီး: D2 autorecptors (2010)